Iindaba -Izibonelelo zeTafile yentsimbi yentsimbi
Izibonelelo zentsimbi yentsimbi
Kungekudala emva kokuba ndiqale ukudibana neti, umhlobo wandazisa kwiketile emnyama yentsimbi yaseJapan, kwaye kwangoko ndatsalwa kukungcamla okuqhelekileyo. Kodwa andizazi izibonelelo zokuyisebenzisa, kwaye imbiza yentsimbi inzima kakhulu. Ngokuqonda kwam ngokuthe ngcembe iiseti zeti kunye nolwazi lomsitho weti, ndiye ndafunda kancinci ukuba izibonelelo zokwenza iti kulembiza yentsimbi zikhulu kakhulu! Intsimbi yentsimbi Into elungileyo kukuba inokuwuphucula ngokupheleleyo umgangatho wamanzi kwaye yonyuse incasa emnandi yeti. Ibonakaliswe ikakhulu kula manqaku alandelayo:
Izibonelelo zokwenza iti kwimbiza yentsimbi eguqula ubungakanani bamanzi
1. Impembelelo yasentabeni yasentabeni: Uluhlu lwamatye esanti aphantsi kwehlathi lentaba luhluza amanzi asentwasahlobo kwaye luqulathe iiminerali, ngakumbi ion zentsimbi kunye nomkhondo weklorin. Umgangatho wamanzi amnandi kwaye ngawona manzi afanelekileyo okwenza iti. Iimbiza zentsimbi zinokukhupha ii-ayoni zentsimbi kwaye zinokufunxa ii-chloride ion emanzini. Amanzi abiliswe ngeembiza zentsimbi kunye nemithombo yeentaba zinefuthe elifanayo.
2. Iziphumo kubushushu bamanzi: Imbiza yentsimbi inokunyusa indawo yokubila. Xa usenza iti, amanzi angcono xa esandula ukwenziwa. Ngeli xesha, ivumba lesuphu yeti ilungile; ukuba ibilisiwe amaxesha amaninzi, igesi enyibilikisiweyo (ngakumbi ikhabhon dayoksayidi) emanzini isuswa rhoqo, ukuze amanzi "abe mdala" kwaye incasa entsha yeti iyancitshiswa kakhulu. Amanzi angashushu ngokwaneleyo abizwa ngokuba “ngamanzi athambileyo” kwaye akakulungelanga ukwenza iti ngeketile yentsimbi. Xa kuthelekiswa neetapile eziqhelekileyo, iimbiza zentsimbi zinobushushu obufanayo. Xa kushushu, amanzi asezantsi kunye nobushushu obujikelezileyo kunye neqondo lobushushu anokuphuculwa ukufezekisa ukubila kwangempela. Xa kusenziwa iti enevumba elimnandi efana ne "Tieguanyin" kunye ne "Old Pu'er Tea", ubushushu bamanzi mabube phezulu, kwaye amanzi "aphekiweyo nangaliphi na ixesha" aya kwenza isuphu yeti ikumgangatho olungileyo kwaye asilele ukufikelela kwitea eyaneleyo kunye ulonwabo lokugqibela;
Xa sibilisa amanzi okanye senza iti kwiketile yentsimbi, xa amanzi ebila, i-ayoni iya kukhupha ii-ayoni ezininzi zentsimbi ukongeza intsimbi efunwa ngumzimba. Ngokwesiqhelo abantu bathatha i-trivalent iron ukusuka ekutyeni, umzimba womntu unokufumana kuphela i-4% ukuya kwi-5%, kwaye umzimba womntu unokufumana malunga ne-15% ye-ion ye-ferric, ke oku kubaluleke kakhulu! Kuba sisazi ukuba ukusela iti kuyilungele impilo yethu, kutheni singenakwenza ngcono?
Okokugqibela, ndifuna ukukhumbuza ngokugcinwa kunye nokusetyenziswa kweeketile zentsimbi: iityile zentsimbi ziya kukhazimla kwaye kube lula ukuzicoca emva kokusetyenziswa kwexesha elide. Umphezulu uhlala ucinywa ngelaphu elomileyo, ke isicwebezelelo sensimbi siyakuvela ngokuthe chu. Ingathi yimbiza yesanti emfusa kunye neti yePu'er. Ikwanobomi; mayigcinwe yomile emva kokusetyenziswa. Kunqande ukuhlamba imbiza eshushu ngamanzi abandayo okanye ukuwa kwindawo ephezulu, kwaye kufuneka kuqatshelwe ukuba imbiza ayifanele yomiswe ngaphandle kwamanzi.